Duloxetine : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 19/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Duloxetine ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Duloxetine ကိုစိတ်ကျရောဂါနဲ့ စိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ကိုကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Duloxetineဟာဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အာရုံကြောနာကျင်မှုတွေ၊ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် ခါးနာခြင်း၊ ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်းစတာတွေကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Duloxetine ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုတိုးတက်စေပြီး အိပ်ပျော်စားဝင်စေကာ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ရောဂါတချို့ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။Duloxetineကို SNRI ဆေးအမျိုးအစားအဖြစ်လည်းသိရှိကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲက သဘာဝပစ္စည်းများ (serotonin နဲ့ norepinephrine) ကိုဟန်ချက်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်းသောက်ပါ။ တနေ့ကို ၁-၂ကြိမ် အစာနဲ့ (သို့) အစာမပါဘဲသောက်ပါ။ ပျို့အန်ရင် အစာနဲ့တွဲသောက်ပါ။ ဆေးတောင့်တတောင့်လုံးကိုသောက်ပါ။ ဝါးစားခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း၊ ချေခြင်း၊ ဆေးတောင့်ကိုဖွင့်ပြီးအစာရေများနဲ့ ရောခြင်းမပြုပါနဲ့။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။
သောက်ရမယ့် ဆေးပမာဏဟာအသက်အရွယ်၊ ရောဂါအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ပုံတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျော့ကျအောင် ဆေးကိုပမာဏအနည်းငယ်လောက်ကနေစသောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုတိုးသောက်သွားရမယ်ဆိုတာပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတာကိုသေချာလိုက်နာပါ။ အာနိသင်အပြည့်အဝရအောင် အချိန်မှန်သောက်ပါ။ သတိရအောင် ဆေးသောက်ချိန်ကိုတသမတ်တည်းသောက်ပါ။
နေကောင်းလာရင်တောင် ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲဆေးကိုမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆေးကိုရုတ်တရက်ရပ်လုက်ရင် အခြေအနေပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ မူးဝေခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်အတက်အကျဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ပုံပြောင်းခြင်း၊ ဓါတ်လိုက်သလိုခံစားရခြင်းစတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မကြုံရအောင် ဆေးပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသွားရပါတယ်။ ဝေဒနာတွေ အသစ်ပေါ်လာရင်၊ ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။ မသက်သာရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။
Duloxetine ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Duloxetine ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Duloxetine ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Duloxetine အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအခြေအနေတွင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ နို့တိုက်ချိန်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးနေချိန်။ ဆရာဝန်အညွှန်းမလိုဘဲ ဝယ်နိုင်သောဆေးများ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များမှာ ထုတ်လုပ်ထားသောဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်အားဆေးများစတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Duloxetine တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
Duloxetineဟာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းများ ဖြစ်စေပြီးဆုံးဖြတ်ချက် တွေးခေါ်ခြင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားမောင်းနှင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်နေရင် သတိပြုသင့်ပါတယ်။
Duloxetineသောက်နေချိန်မှာအယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ အဖျော်ယမကာတွေကိုစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုသောက်သုံးရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ အယ်လ်ကိုဟောဟာDuloxetineရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဆိုးရွားစွာ မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
Duloxetineသောက်နေချိန်မှာလဲေလျောင်းနေရာကနေရုတ်တရက် ထလိုက်တဲ့အခါ မူးဝေသတိလစ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအချိန် စသောက်ရင်၊ ဆေးကိုမြှင့်သောက်ရင် ပိုကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် အိပ်ရာကနေထတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံး ဖြည်းဖြည်းထိုင်ပါ။ ခဏနေမှ မတ်တပ်ရပ်ပါ။
Duloxetineဟာသွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းတက်စေပါတယ်။ ဆေးမသောက်ခင်မှာရော၊ သောက်နေချိန်မှာပါ သွေးပေါင်ချိန်ကိုပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ရေတိမ်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင်မှာမျက်စိစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပျို့အန်ခြင်း၊ မျက်လုံးအောင့်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊ အလင်းရောင်မှာရောင်စဉ်တန်းများ မြင်နေရခြင်း၊ မျက်စိတဝိုက် နီရဲရောင်ရမ်းခြင်းစတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Duloxetine ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Duloxetine ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Duloxetine ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Cရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
D= ဆိုးကျိုးများရှိသည့် အထောက်အထားများရှိပါသည်။
Duloxetine ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အရေပြားပေါ် အကွက်ဖြစ်ခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရန် စကားပြောရန်ခက်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာလည်ချောင်းစသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်းစတာတွေဖြစ်ရင် ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ပူခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခြင်း၊ တခုခုကိုမလုပ်ရမနေနိုင်ခြင်း၊ သည်းမခံနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကြီးခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှု လွန်ကဲခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပိုကျလာခြင်း၊ သေကြာင်းကြံလိုစိတ်များပေါ်လာခြင်းစတာတွေကြုံလာရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အောက်ပါပြသနာများရှိလာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။
ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဆီးမည်းခြင်း၊ ဝမ်းမည်းခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြားခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓါအစိတ်အပိုင်းများထိန်းညှိလုပ်ဆောင်နိုင်မှု မရှိခြင်း
ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊ အားနည်းခြ်ငး၊တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူပုံမမှန်ခြင်း
အသားအရေတွင် ဆိုးရွားသောလက္ခဏာများပေါ်လာခြင်း။ ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ (သို့) လျှာရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပူခြင်း၊ အသားများနာခြင်း၊ အသားအရေပေါ် အနီက။ါက် ခရမ်းကွက်များပေါ်လာခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားများကွာကျခြင်း
တခြားတွေ့ရများတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရချိန်မှာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ မပါဝင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Duloxetine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Duloxetine ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။ အောက်ပါဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
5-HT1 receptor agonists (ဥပမာsumatriptan), buspirone, fentanyl, linezolid, lithium, lorcaserin, MAOIs (ဥပမာphenelzine, rasagiline), quinidine, SNRIs (ဥပမာ venlafaxine), SSRIs (ဥပမာ fluoxetine, fluvoxamine), St. John’s wort, tramadol, tricyclic antidepressants (ဥပမာ amitriptyline), (သို့) tryptophan။ ဖျားခြင်း၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် ပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ သည်းမခံနိုင်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မြောခြင်းစတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးကျဲဆေးများ (ဥပမာ Warfarin), aspirin (သို့) စတီးရွိုက်မဟုတ်သောအရောင်ကျဆေးများ (ဥပမာ Ibuprofen)။ အစာအိမ်သွေးယိုခြင်း အပါအဝင် သွေးထွက်နိုင်ခြေကို မြင့်စေပါတယ်။
ဆီးဆေးများ (ဥပမာfurosemide, hydrochlorothiazide)။ သွေးတွင်းဆိုဒီယမ်ဓါတ်ကိုလျော့ကျနိုင်စေပါတယ်။
Cimetidine, သွေးကျဆေးများ, (သို့) quinolone ပဋိဇီဝဆေးများ (ဥပမာ ciprofloxacin)။ duloxetine ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို မြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
Tamoxifen။ duloxetineရဲ့ အာနိသင်ကိုလျော့စေနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Duloxetine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Duloxetine ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Duloxetine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Duloxetine ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ယခုအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာအကြံပေးမှုကို အစားထိုးရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင့်ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Duloxetine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကနဦးပမာဏ။ သောက်ဆေးအနေဖြင့် တနေ့လျှင် ၂၀မီလီဂရမ် သောက်ရန်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်။ တနေ့လျှင် ၆၀ မီလီဂရမ်ကိုတကြိမ်တည်း (သို့) ၃၀မီလီဂရမ်စီ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်ရန်။
အမြင့်ဆုံးပမာဏ။ တနေ့လျှင် ၁၂၀ မီလီဂရမ်
သောက်သုံးရန်ကာလ။ လပေါင်းများစွာ ကြာတတ်ပါတယ်။
ကနဦးပမာဏ။ သောက်ဆေးအနေဖြင့် တနေ့လျှင် ၃၀မီလီဂရမ် တပတ်သောက်ရန်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်။ တနေ့လျှင် ၃၀ မှ ၆၀ မီလီဂရမ်။
သောက်သုံးရန်ကာလ။ ၃လလောက်ထိ သောက်ရပါတယ်။ အဲဒီကာလထက်ကြာရင် ထိရောက်မှုရှိမရှိကတော့ မသိရပါဘူး။ လူနာတယောက်ချင်းရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးဆက်လက်ကုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦးပမာဏ။ သောက်ဆေးအနေဖြင့် တနေ့လျှင် ၆၀မီလီဂရမ် သောက်ရန်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတရက်လျှင် ၃၀မီလီဂရမ်ကို ထပ်ပေါင်းတိုးမြှင့်သွားရန်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်။ တနေ့လျှင် ၆၀-၁၂၀မီလီဂရမ်
ကနဦးပမာဏ။ သောက်ဆေးအနေဖြင့် တနေ့လျှင် ၃၀-၆၀ မီလီဂရမ် သောက်ရန်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်။ တနေ့လျှင် ၆၀ မီလီဂရမ်
ဆီးချိုသမားများအစွန်အဖျားအာရု့ကြောပြသနာကြောင့် နာကျင်ခြင်းအတွက်။ ၁၂ပတ်ကျော်ရင် ထိရောက်မှုရှိမရှိမသိရပါဘူး။ တဦးချင်းစီပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ကြွက်သားနှင့်အရိုးများနာတာရှည် ကိုက်ခဲခြင်း။ ၁၃ပတ်ကျော်ရင် ထိရောက်မှုရှိမရှိမသိရပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Duloxetine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စစချင်းမှာတနေ့ကို ၃၀မီလီဂရမ်နဲ့ ၂ပတ်သော်ကရပါတယ်။ ၆၀ မီလီဂရမ်ထိတိုးမယ်လို့ မဆုံးဖြတ်ခင် ဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၃၀ ကနေ ၆၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတချို့မှာတနေ့ကို ၆၀မီလီဂရမ်အထက် သောက်ရင် ထိရောက်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
တနေ့ကို ၆၀မီလီဂရမ်အထက် တိုးမြှင့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် နေ့စဉ် ၃၀မီလီဂရမ် တိုးနိုင်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံးပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၁၂၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထက်ကျော်ရင် ဘေးကင်းမှုရှိမရှိကတော့ မလေ့လာရသေးပါဘူး။
Duloxetine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
တဖြည်းဖြည်းချင်းအာနိသင်ပြသောဆေးတောင့်ပုံစံ။ Cymbalta: 20 mg, 30 mg, 60 mg
အရေးပေါ်အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေများမှာအရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
Duloxetine ဆေးကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
Duloxetine. https://www.drugs.com/cdi/duloxetine-delayed-release-capsules.html. Accessed July 24, 2017
Duloxetine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-91490/duloxetine-oral/details. Accessed July 24, 2017